हाम्रा महिलाहरू सुरक्षित स्यानिटरी प्याडको अभावमा कति पीडाबाट गुज्रीरहेका होलान् : डा. भट्टराई - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ माघ २०७४, शुक्रबार ०४:५५ |
काठमाडौं । महिलाहरुको यौनस्वास्थ्य विषय गम्भीर विषय हो। तर नेपाली समाजमा यसलाई लाज र संस्कारको विषय बनाइदा महिलाहरु यौन समस्यामा पर्ने गर्छन् । अझ महिनावारिलाई त ‘पाप’ को संज्ञा दिइन्छ।
महिनावारीलाई पाप भनेका कारण सरसफाई र सफा तथा सुरक्षित सेनेटरी प्याडको प्रयोग गर्न नपाउँदा र त्यस सम्बन्धि ज्ञान नहुँदा महिलाहरु विभिन्न रोगको शिकार बन्छन् । यो विषयलाई उठान गरेर बलिवुडमा अहिले अक्षय कुमार अभिनित चलचित्र बनेको छ ‘प्याडम्यान’ । यही चलचित्र, एक च्यानलको कार्यक्रम र हाम्रो समाजको अवस्थामा आधारित रहेर नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले एउटा संदेशमुलक पोस्ट सामाजिक संजालमा राखेका छन् ।
महिलाहरूले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडवारे देशको एउटा पूर्व प्रमले फेसबूक मार्फत चर्चा गर्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला, रिस उठ्ला! एकछिन पर्खनोस्!
भारतीय गणतन्त्रदिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय राजनीतिवारे बुझ्ने मनसायले टिभी च्यानल चाहार्दै जाँदा ZEENEWS को एउटा कार्यक्रमले मनमस्तिकमा नराम्रो झट्का दियो!
भारतका ४० करोडमध्ये १२% महिलाले मात्र महिनावारी भएका वेला सुरक्षित स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दा रहेछन्; बाँकी ८८% ले फोहोर कपडा, पराल, खरानी आदि प्रयोग गर्दा रहेछन्। जसका कारणले ७०% लाई विभिन्न यौनांगजन्य रोग लाग्दो रहेछ! २४% किशोरीहरू महिनावारी भएका वेला स्कूल नजादारहेछन्।
यसका विरूद्ध जनस्तरमा अभियान चलाउने र स्यानिटरी प्याड सर्वसुलभ रूपमा उपलव्ध गराउन सिर्जनात्मक आविष्कार गर्ने १६ जनालाई गणतन्त्रदिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सम्मान दिइँदैरहेछ! यसै विषयमा केन्द्रित एउटा फिल्म PadManपनि बनेको रहेछ!
के तपाईंहामीले हाम्रो देशमा यो समस्यावारे कहिल्यै सोचेकाछौं? कहिलेकाहीं हामी मध्य र सुदूर-पश्चिमका विकट पहाडी जिल्लामा छाउपडी प्रथाद्वारा महिलाहरूको मृत्यु भएको समाचार सुन्छौं र केही दिन उद्वेलित हुन्छौं।तर गरीवी, अशिक्षा, अन्धविश्वासबाट ग्रसित हाम्रो समाजमा हाम्रा महिलाहरू सुरक्षित स्यानिटरी प्याडको अभावमा कति पीडाबाट गुज्रीरहेका होलान् र अकालमै मरिरहेका होलान् भन्ने कहिल्यै सोचेका छौं?
अब सोच्न ढिलो र आलटाल नगरौं! क्रान्ति, परिवर्तन, समृद्धि यस्तै ‘झिनामसिना’ र ‘अप्रिय’ कुराबाटै शुरू हुन्छन् भन्ने नभुलौं!! आगे जो मर्जी!!
Previousनेपाल आउन लागेका सलमान खानलाई हेर्न तीन हजार देखि १० हजार सम्मको टिकट
Nextनेपालका वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. रुइतलाई भारतले दियो पद्मश्री सम्मान